Safaarada Soomaalida ee Kenya oo Passaboorka u diidey OGAADEENKA | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Safaarada Soomaalida ee Kenya oo Passaboorka u diidey OGAADEENKA
November 9, 2012 –Magaalada Nairobi ee Caasimadda Wadanka Kenya waxaa ku taala Safaaradda Soomaaliya ee Kenya, wexeyna Leedahay Qeyb qaabilsan Baasaboorada, iyo fududeynta Waraaqaha dib ugu noqoshada dalka, Soomaali aad u badan ayaa Safaaradda Maalin kasta u doonta Baasabooro si danaha ay leeyihiin ay ugu qabsadaan, waxaana dhowanahaanba soo baxayay Cabashooyin Shacabka ka imaanaya kuwaasi oo ka dambeyyay kadib markii Safaaradda uu Laaluush-ka Sharci ka noqday.
Marka aad gasho Safaaradda waxaad arkeysaa rag badan oo kamid ah Mukhalasiintii caanka ka ahaa Xaafadda ay Soomaalida dagantahay ee Islii Kuwaasi oo si caadi ah howlmaalmeed uga dhigtay in dadka Safaaradda lagu dhibo ee baasaboorada la siin waayo ay Laaluush ka qaadaan kadibna ay usoo saaraan.
Safaaradda Wexey horey u laheyd Qeyb ku shaqo leh Qunsuliyadda waxaana Qunsul ka ahaa Alle ha u naxariistee Marxuumkii Geeriyooday ee Maxamed Cusmaan Aadan ( Edson ), hadda si KMG ah u jooga CALI MAXAMED SHEEKH oo loo yaqaano CALI BAGADI, oo ka soo jeeda DIGIL IYO MIRIFLE.
Cali Bagadi oo marka uu dadka la hadlayo si Kulkulul ula hadla si qofka intey xanaaqdo ay Xafiiskiisa isaga soo baxdo kadibna Mukhalasiin intey soo marto ay danaheeda uga fushato Xafiiska Qunsuliyadda ayaa Maanta Si cad usoo Eryay dad Soomaali ah oo uu ku sheegay in ay Ogaden-ka Ethiopia Yihiin, iyo Kuwa Kenya kadibna u sheegay in qof Ogaden ah uusan Baasaboor ka qaadaneynin Safaaradda Soomaaliya ee Kenya.
Cali Bagadi wuxuu yiri Shalay koox dhalinyaro ah isagoo kula hadlaya Af Sawaaxili “ Wewe Toka Hapa We nin Ogaden, we ni Mkenya ama MEthiopia” oo la micno ah “ waryaa bax waxaad tahay Ogadenka Kenya ama Kan Ethiopia, adiga Soomaali ma tihid.
Qofka markii Basaboor u doonto Safaaradda wuxuu Cali Shaqaalaha ku amray in Xafiiskiisa ay ugu geeyaan si uu wareysi ula yeesho kadibna uu isagu Go’aan uga gaaro.
Mararka qaar hadii aadan Mikhalaska wadan aad bey u adagtahay in aad u gudubto Xafiisyada Ragga Madaxda ah ay fadhiyaan ee Safaaradda, hadiisa aad Mukhalas wadato Safaaradda adigaa ka madax ah.
SAFIIRKA inta badan Safaaradda waa ka maqanyahay, hadii uu joogana waxba kalama socdo howlaha ka soconaya, oo marna waa iska mashquul, marna si hoose Shaqaalaha uma xog wareysto, marna dibadda ayuu ku maqanyahay.
Maxamed Cali Ameeriko ma is lihi waxbuu ka ogyahay Heyb kala sooca ka Jira Safaaradda Laakiin marka awoodiisa la eego Shaqaalaha la jooga qaar wexey kuu sheegayaan in inta badan ay ku yimaadeen 4.5 oo waxaa la sheegaa in ninka Iminka Qunsulka isku magacaabay uu meesha u fadhiyo Shariif Sakiinkii la eryay.
Ameeriko marar badan oo uu Soomaalida la hadlayay xitaa waxaa uu ugu baaqay in Soomaalida Kenya ay Baasaboorada qaataan maadaama ay Soomaali yihiin, Laakiin Hadalkiisa ayaa u muuqanaya mid aan meel dheer tagi Karin maadaama qaar kamid shaqaalihiisa ay si hoose amaradiisa uga hor imaanayaan taasi oo ku tusineysa in Meesha lagu wada joogo Nidaamka awood qeybsi 4.5.
Dadka Shacabka ah ee Baasaboorada iyo Waraaqaha GURI KU NOQOSHADA u doonta Safaaradda ma helaan ilaa ay mukhalas soo wakiishaan, dadka qaar waxaa loola dhaqmaa si ku jees jees ah iyadoo mararka qaar la yiraahdo adiga Soomaali ma tihid.
Shalay oo ay ugu dambeysay Safaaradda Cali AMeeriko waxaa laga soo celiyay 4 Dhalinyaro ah oo markuu Wareystay Cali Bagadi uu ku sheegay in ay yihiin Somalida Ogadeniya iyo Soomaalida Kenya, Balse ahaayeen Soomaali Dhalad ah oo ku dhashay Kismaayo iyo deegaanada ku dhow.
Cali Bagadi isagoo ku Jeesjeesaya ayuu ku yiri dhalinyarada “ Waryaa sow Ogaden Maahid, Waxaad tahay Ethiopian, Ama Kenyan sidaas darteed Soomaali maahid anagana Baasaboor kuuma heyno, taasi oo ka dhigan In Safaaradda ay u shaqeyso Mukhalas iyo in yar oo la socota.
Maxay Somalidu u dhaafi la,dahay Qabiil? Prof Jawaari oo Jeebka u Galay Damul Jadiid, Madaxweynahana Weydiistay Inuu Baarlamaanka Hor Yimaado “Si uu Uga Warbixiyo Cida Ka Talisa Kismaayo”